Kune vanhu vazhinji vane mukurumbira vakashandisa mavhiripu. Ivo mumwe nemumwe akasiya chakasimba chakadzika muminda yavo zvisinei nekuremara kwavo. Heano vanhu vashanu vane mukurumbira vakashandisa mavhiripu.
Fizikisi ane mukurumbira uyu aive nemhedzisiro yakakura pahuwandu hwehuwandu uye simba rekunaka. Chimwe chezvikamu zvake zvakakosheswa zvebasa raive bhuku rake, Nhoroondo Pfupi Yenguva. Kushanda kwake nemakomba matema kwakamutungamira kuti aone kuti dzinoburitsa mwaranzi.
Pa 21, Stephen Hawking akaonekwa aine ALS uye akaudzwa kuti achangorarama kwemakore maviri. Zvisinei, akararama zvakanaka kusvika kuma2s ake. Hawking akaoma mitezo kubva kumusoro kusvika kumagunwe kweanopfuura makore makumi matatu. Asi, nekushandisa izwi synthesizer, aikwanisa kutaura.
Mutungamiri wemakumi matatu nemaviri ndiye ega Mutungamiriri akasarudzwa kumatemu mana kubva muna 32 kusvika 4. Munguva yezhizha ra1933, akabatwa nechirwere chinofungidzirwa kuti poriyo pazororo nemhuri yake kuCampobello Island. Roosevelt akaoma mitezo kubva muchiuno zvichidzika. Zvisinei, akaedza nzira dzakasiyana-siyana dzokurapa kuti adzokerezve kumakumbo ake, kusanganisira hydrotherapy. Akakwanisa kufamba chinhambwe nesimbi simbi uye tsvimbo.
Ndichiri kuruzhinji Roosevelt haana kumboshandisa yake wiricheya. Zvinotendwa kuti aizoenda kure kure kuti aone kumuona kwake kubva kuruzhinji rweAmerica. Izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nemanzwiro aripo kune avo vakaremara panguva iyoyo.
Anonyanya kuzivikanwa nebasa rake saSuperman, Christopher Reeve aive mutambi, director, munyori, mugadziri, uye mumiriri. Ane makumi mashanu ekuita zvikwereti, Reeve akasiya zvinogara zvema cinema neterevhizheni zvichiri kurangarirwa nanhasi. Kutevera tsaona yekutasva bhiza, Reeve akasara akaoma mutezo kubva uye akavharirwa kune a wiricheya.
Zvisinei, izvi hazvina kutadzisa Reeves. Akakumbira vanhu vane musana kukuvara uye kutsvagiswa kwemasero emadzinde. Akavamba Christopher Reeve Foundation uye akabatanidza Reeve-Irvine Research Center.
Mexican Surrealist pendi Frida Kahlo ainyanyo kuzivikanwa nekuda kwake kunoshamisa uye kune mavara mavara. Paaive nemakore gumi nemasere, Kahlo akapinda mutsaona yebhazi iyo yakasiya zvinhu zvake zvakakomba zvemuupenyu hwake hwasara.
Rakawanda rebasa rake rairatidza kurwadziwa kwaakatsungirira kubva mutsaona iyi. Basa rake rinoramba richizivikanwa nanhasi. Anozivikanwa saFrida-mania, iye upenyu uye mifananidzo inotaura zvakawanda zvevakadzi, zvepabonde, uye rudzi.
Aimbova Texas congresswoman ndiye mukadzi wekutanga mutema akasarudzwa kuTexas State Senate uye wekutanga mutema Texan muCongress. Joridhani akatambura neakawanda sclerosis aive wiricheya akasungwa. Nekudaro, akaramba akavanzika nezvehurwere hwake. Muna 1994 akapihwa Presidential Medal yeRusununguko.